"Itoobiya Waa Inay Iib Ama Kiro Ku Heshaa Deked…" | Dhamays Media Group
Addis Ababa (Dhamays) – Dawladda Itoobiya ayaa sheegtay iney adeegsaneyso dakadaha waddamada deriska la ah si ay uga kaaftoonto ku tiirsanaanta dakadaha Jabuuti oo keli ah.
Itoobiya oo ah dal ay ku nool yihiin in ka badan 100 malyan oo dhul weyna ku fadhida ayaan lahayn dakad ay iyadu leedahay oo ay wax kala soo degto ama ay ka dhoofiso.
Wasiirka Gaadiidka ee Itoobiya Daagmaawiit Moges oo FBC u warrantay waxay sheegtay dalka Itoobiya alaabaha uu dhoofiyo ama uu soo dajiyo 99% inuu ku tiirsanaa dakadaha Jabuuti oo keli ah, balse hadda la doonayo seddex dakadood oo kale oo ku yaalla waddamada deriska in uu dalka Itoobiya isticmaalo.
“Dakadaha aan isticmaalkooda bilaabeyno qaarkoodna aan horay billownay waxay kala yihiin Dekadda Berbera, Dekadda Lamu iyo Dakadda Port Sudan, isticmaalka dekadahaasina waxay keeneysaa ku tiirsanaantii dakadaha Jabuuti ee ahayd 99%, iney noqoneyso 89% meelahaa iyada oo dekadaha cusub ee aaan isticmaaleyno 8.8% ay kaalintooda noqoneyso” ayey tidhi.
Itoobiya waxay dhawaan meel marisay siyaasaddeeda ku aaddan Logistika (Logistic Policy), waxaana lagu qeexay inay lagama maarmaan tahay Itoobiya inay dakad hesho inta ay dakad ka heleysana ay sii isticmaasho dakadaha waddamada Deriska la ah ee u dhow.
Itoobiyana waxay dhawaan heshiis saddex geesood ah la gashay Somaliland iyo shirkadda DP World ee laga leeyahay Imaaraadka Carabta oo maalgashi ku sameynayo dakadda Berbera.
“Dekadda Berbera si aan u isticmaalno gudaha Itoobiya waxaa laga wadaa mashaariic isugu jira waddooyin isku xidha Itoobiya iyo Berbera iyo tasiilaadkii kale oo gacan ka geysanaya inaan dekadda Berbera si buuxda u isticmaalno. Shirkadda DP World waxaan la galnay heshiis ay ku kaceya 1 bilyan oo doollar, Adeegsiga Dekedda Laamuu dowladda Kenya heshiis ayaan kala galnay iyada oo dhawaan xadhigga laga jaray waddooyinkii Itoobiya iyo dakadda isku xidhi lahaa” ayey tidhi.
Barafasoor Matiwos Insermo oo ka takhasusay cilmiga Logistika kana tirsan Jaamacadda Addis Ababa wuxuu sheegay inay lagama maarmaan tahay Itoobiya iney Dekad ku hesho Iib, Gorgortan ama Kiro.
“Waddamada dakadaha leh dekadahooda in la isticmaalo waa midda koowaad, midda labaad waddamada dekedaha leh oo gorgortan lala galo si deked loo helo iyada qaab Liiz (kiro muddo dheer) ama In Dakado laga iibsado ama dekadahaa la maalgashado iyada oo si gaar ah xoogga loo saarayo horumarinta dekadaha waddamada deriska la ah Itoobiya ay leeyihiin taasoo u suuragelinaya inay Itoobiya hesho Deked ay iyadu leedahay ama maausho” ayuu yidhi Barafasoor Matewos Insermo.
Tallaabbooyinkaasi haddii ay dowladda Itoobiya qaaddo waxay fursad u siineysaa iney muddo kooban ay ku tallaabsato horumar dhaqaale oo dalka wax badan ku soo kordhiya maadaama oo ay dekeduhu halbowle u yihiin kobac dhaqaale ee dalka.
Itoobiya sidee Dakad la’aan ku noqotay?
Itoobiya waa dal aanan bad lahayn, waxayna taas dhacday sanadkii 1993-dii markii ay madaxbanaani ku dhawaaqday Eritrea oo markii hore ka mid ahayd dhulweynaha Itoobiya, waxaa kale oo intaas xigay in labada dal ay dagaallameen sidaasi darteedna dekedda Casab waxa ay noqotay meel ayna galaangal u lahayn dowladda Itoobiya.
Itoobiya oo shacabkeedu ka badan yahay 100 milyan oo qof, wuxuuna dalkani u baahan yahay in uu la soo dego badeeco aad u badan, isla-markaasna dhoofiyo wax soo-saar kale sida bunka oo uu caan ku yahay, sidaas awgeed waxa uu ku qasban yahay in la helo deked si sahlan loo isticmaali karo.
Muddo ka badan 30 sanadood, Itoobiya waxa ay isticmaalaysay dekada Jabuuti iyo dekedda Sudan, balse markan waxa ay Itoobiya qaadaysaa tallaabo ay kula wareegeyso saami dekadaha inta badan dalalka dariska.
2018-kii waxa uu muran weyn ka dhashay kadib markii dowladda Itoobiya boqolkiiba 19% laga siiyay saamiga dekada Berbera, waxayna tan ka dambeysay kadib markii shirkadda DP World iyo Somaliland wada galeen heshiis ay shirkadda ku maamulayso dekadda.
Mas’uuliyiinta Somaliland ayaa sheegay in shirkadda DP World ay saamigeeda ka sii iibisay Itoobiya, taasna ay xaq u leedahay.
Dowladda Soomaaliya ayaa inkasta oo ayna si toos ah uga hadlin saamiga Itoobiya, ayay gabi ahaanba ka hor timid heshiiska dekeda Berbera, iyada oo xitaa baarlamaanka uu meelmariyay xeer dalka lagaga mamnuucayo shirkadda DP World, isla-markaasna lagu laalayo heshiiska.
Ra’isal wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo 2018 mar uu ka hadlayey Dekadaha isticmaalkooda wuxuu yidhi “biyahaasi aan dabiici ahaan ku helnay haddii aan dekad ahaan u isticmaalno maadaama uu u dhow yahay marin muhiim ah hanti badan ayaan ka heleynaa, annaguna wax kala iibsiga ina dhexmaraya lafteeda waxaa isku dhaafsan karnaa hanti aad u badan, Soomaliya, Kenya , Jabuuti iyo Eretiriyaba, waxaan noqoneynaa tira shacab oo gaadhaya kala badh iyo ka badan shacabka Mareykanka, waa shacab aad u badan”.
Previous: Mooge oo madaxtooyada iska dhiibay Iyo Damacii Mucaaradkii oo fashilmay
Next: Dawladda Sucuudiga Oo War Cusub Ka Soo Saartay Xajka Sanadkan